Teknolojia vaovao momba ny firaisana ara-nofo
Amin'ny fiainam-pahafinaretana, ny mpiara-miasa ihany no tsy mahazo alalana. Maro ny olona mieritreritra firaisana ara-boa ho tena fanilihana, fa mihamaro ny mpivady mampihatra izany. Efa hatramin'ny ela no nahafantarana fa nanamboatra lisitry ny teknika manokana ny firaisana ara-nofo. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia namoaka ny lisitr'ireo fisainana vaovao isika izay ahafahanao mahagaga ny namanao.
Techniques de sexe oral pour les femmes
Amin'ny alàlan'ny fomba famokarana lalina, ny loha dia tokony hitsahatra mivantana ao amin'ny palace. Afaka milalao mandritra ny fotoana kelikely ianao ary miakatra indray, ary midina indray. Andramo indray, manandrana manamboatra orona valo amin'ny rivotra sy any amin'ny faritra matevina. Azonao atao koa ny mihevitra fa tsy maintsy manafaka ny penis amin'ny vavanao ianao indraindray - manova olona koa.
Tazony ny pensisanao, fa tsy lalina. Ampiasao amin'ny lela ny loha, ary sasao ny lamboridy. Mba hampivoarana an'io teknika io, dia afaka manao fihetsika haingana amin'ny lohany sy ankavanana ianao rehefa azonao ny lambanao. Ny fanentanana malefaka amin'ny tanana koa dia hampisy fahatsapana mahafinaritra. Ny fatorana toy izany dia azo ampitaina amin'ny matanjaka sy feno.
Eo amin'ny fototry ny penis dia ny lakandrano izay mihetsiketsika. Raha mikarakara ny penis amin'ny tànanao sy ny molotra ianao, dia mila manakana azy io tsy ho ela. Ny fanaratsiana ny fitifirana mandritra ny ejaculation dia mety hitondra olona ho any paradisa fahafinaretana. Noho izany, rehefa mivoaka ny voa, ny orgasme dia hahomby.
Atsofohy amin'ny antsasaky ny taovam-pananan'ny lahy sy ny vavy, ary avy eo, raha tsy mamaha ny vakim-boka, dia esory tsikelikely avy ao am-bavanao izany. Ny hivoahan'ny fihetsiketsehana dia mety ho miadana na haingana, fa matetika ny antsasany mahery no tia haingana. Tsara homarihina fa tsy mitaky fihetsiketseham-pitenenana hafa io fomba io.
Eo am-piandohana, mamaivay ny molotra, aforeto manodidina ny lohany ary manomboha tsikelikely amin'ny rindrina. Manaova fiovana miandalana. Fantatra fa ny tetezana dia iray amin'ireo faritra mahery indrindra erogenous, noho izany fomba izany dia mety hitarika amin'ny orgasme mahery vaika.
Fomba fanao amin'ny lahy sy ny vavy
Mahagaga fa tsy mahalala ny fomba tsotra indrindra amin'ny firaisana amin'ny vehivavy ny vehivavy. Noho izany karazana fanentanana izany, tokony hampiasa ny tananao ianao. Miara-mifangaro tsiranoka amam-bozaka miaraka amin'ny dipoavatra midadasika, mihamitombo tsikelikely. Manomboka hatrany amin'ny fikarakarana mora foana ary mitondra azy ireo haingana kokoa.
Aza manendrikendrika ny faritra iray manontolo, miezaka mifantoka amin'ny fizarana tsirairay. Tia tia vehivavy ny ankizivavy, noho izany dia tokony hampahafana ny mpiara-miasa aloha ianao, ary avy eo manoratra am-pahibemaso ny molotry ny valo sy ny faribolana. Aza adino ny mamaivay ny tany sy ny rantsan-tànana, raha tsy izany dia afaka miteraka fanaintainana malala ianao. Mandritra ny fikarakarana, dia manova ny rhythm sy ny amplitude ny fihetsiketsehana mba tsy hamerenan'ny lahy ny firaisana.
Ny ankamaroany dia manondro G amin'ny vehivavy dia roa na telo santimetatra avy ao amin'ny vagina, eo amin'ny rindrina ambony ao ambadiky ny pubis. Ho an'ny vehivavy sasany, mety ho lalindalina kokoa io teboka io, fa raha tsara vintana ianao ary afaka mahazo izany amin'ny lelanao, dia manome fahatsapana tsy hay lazaina momba ny malalanao.
Voalohany indrindra, mila manomboka amin'ny clitoris ianao, dia mandehana any amin'ny lobia ary mahazatra tsikelikely ny teboka G. Rehefa manentana ianao, dia afaka mametraka ny lelanao amin'ny tavoahangy ianao, manenjika azy. Io safidy io dia mety amin'ny fikolokoloana ny orgasme .
Manoro hevitra ny kamasutra manomboka amin'ny fomba manaraka. Mifamahofaho amin'ny molotrao ny nifinao ary fenoy ny clitoris anao. Aorian'io, manomboha izany eo amin'ny molotrao amin'ny lafiny samihafa. Tahaka ny mahazatra, manomboka amin'ny hetsika marefo ary mihetsiketsika kokoa hatrany.
Aza tezitra raha misy zavatra tsy miezaka aloha na misy olana. Matetika ianao no mampihatra, ny tsaratsara kokoa azonao takarina sy hahatsapa ny namanao. Any am-parany dia hahavita fahaizana manokana ianao. Ny tena zava-dehibe dia ny tsy tokony hatahotra hanombohana.
Fomba 10 hampivelarana ny fiainana ara-pananahana
Ny virjiny dia virjiny
Nahoana isika no mila firaisana?
Ahoana ny fomba fitondranao am-pandriana?
Fomba fitondran-tena sy ny fomba hisafidianana ny halehibia?
Akory ny hafalianao ny malalanao eo am-pandriana?
Fihetseham-po amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo
Inona no atao hoe tady ary ahoana no fomba ampiasana azy tsara?
Afindra amin'ny Paint - Symptoms
Fialana amin'ny maso ratsy sy fanimbana
Fehiloha fehiloha ho an'ny vehivavy bevohoka
Vetivety ny manongotra ny tananao?
Ahoana ny fandrakofana ny tafon'ny garazy?
Fialofana ho an'ny ankizy
Vehivavy mpanolotsaina Columbia
Hydrocephalus amin'ny zaza vao teraka
Kakazo Broccoli - ahoana no hahandro?
Piombe mamomamo tsara indrindra
Vetivety dia tsy maintsy mandany lanja aorian'ny fiterahana?
Toe-javatra mampiavaka ny vato Selenita
Jennifer Lopez mahafinaritra dia lasa endrika fanentanana fanentanana Guess
Ny booty amin'ny ririnina
Fomba hiadiana amin'ny adin-tsaina